Sidaas waxa uu ahaa in looga shakisan yahay burcad television ayaa lagu qabtay Malmo - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Sidaas waxa uu ahaa in looga shakisan yahay burcad television ayaa lagu qabtay Malmo
Sidaas waxa uu ahaa in looga shakisan yahay burcad television ayaa lagu qabtay MalmoAbout 20 baabuurta booliska kor tusay markii looga shakisan yahay burcad television la xiray Malmo. dadaal The aamusnaan u baxay inuu ka markhaati ah SVT News Skåne sheegi.
Saddex qof ayaa ku fadhiya tan iyo maalintii Isniintii lagu qabtay Malmo looga shakiyay qaybinta sharci-darrada ah ee channels TV. Waxa ay ahayd inta lagu guda jiro bilayska subaxnimadii Isniinta hadda la tuhunsan yahay ayaa weeraray. Swedish Television News ayaa la hadlay markhaati uga dhacdo.
20 baabuurta bilayska
Wuxuu ku jiray dhow meesha at sideed subaxnimo, markii booliisku ay si lama filaan ah u muuqday.
- Markaas ayaan arki u dhaxayso 18 iyo 20 baabuurta kor wadista qolka. Laakiin waxaa jiray baabuur rayid ah, in ay askarta bilayska ka walaacsan, waxaan fahmay oo keliya marka ay ka soo kacay oo sanaaduuqdii Xuddun jaakadaha huruud ah leh "Police" daabacan dhabarka, ayaa sheegay in ninka.
Uu aragti hawlgalka ahayd in wax walba si degan u tegey.
- Waxay u muuqatay si fiican u abaabulan, saraakiisha booliska. Ogaa waxa ay raadinayaan iyo waxa ay samayn lahaa.
Xiray saddex qof
Wuu istaagay oo sii waday in ay raacaan koorsada dhacdooyinka. Booliska ayaa wuxuu galay qolkii, oo ahayd in ay jiraan ilaa hal saac. Markaasay waxay u soo baxeen mar kale iyo iska leh saddexda qof oo loo xiray eryay. Markaasuu la waayay ku dhawaad oo dhan baabuurta goobta.
- Labada qof iyaga ka mid ah ayaa tegey inay gelinka dambe. Oo sidaas daraaddeed waxay istaageen bilays ah ka hor albaabka iyo dhawray.
badan oo la weydiiyay
Police helay hoos ninkii ayaa weydiiyey su'aalo taxane ah oo ka dacwana ee la soo dhaafay oo kaliya inta lagu jiro maalinta.
- Waxaa jiray qaar waxaa u yimid inay ku weyddiiso wax ku saabsan arrintan la sanduuqyada in aad ka akhrisan ku saabsan in warka.
SVT News Scania ayaa codsatay booliiska si loo xaqiijiyo sawirka ah sida weerar ka dhacay, laakiin ma helin jawaab kasta.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-gick-det-till-nar-tv-piraterna-greps-i-malmo11.11.2016. 20:11	Categories